Laptop ပြင်ဆင်မှု နည်းလမ်းများ - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ထဲက သဘောအကျဆုံး Thread တွေထဲမှာ ဒီ Thread လည်း တစ်ခုပါတယ် - ကျွန်တော်က ပြင်ဆင်ရေးဆို သိပ်ကို ဝါသနာပါတာ - ငယ်ငယ်တည်းက စက်ဘီးပျက်ပြင်တယ် - မီးခလုတ်ခုံပျက် ပြင်တယ် - အကျိုးအပဲ့တွေဆို မရရအောင် လိုက်ဆက်တယ် စသဖြင့် - ပြင်ဆင်ရေးကတော့ အရမ်းကောင်းသလို စိတ်လည်း စိတ်ချရတယ် ဟိုတစ်လောက နားကျပ်လေးတစ်ဖက် ကိုင်းကျိုးလို့ဆိုပြီး ပြန်ဆက်ဖို့လုပ်တာ စကားပါပြောမရတော့ဘူး
ခုလည်း ဒီဖိုရမ် ဝင်စတုန်းက ကိုမုန်းလေးရေးတဲ့ ဒီ Topic ကို ဖတ်မိတယ် - အများကြီး အပင်ပန်းခံထားတာ တွေ့ရတယ် - ပြင်ဆင်ရေးပိုင်းကို တစ်ဖက်လူ မြင်သာအောင် ဒီလောက်ထိ အသေးစိတ်ရေးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး - ကျွန်တော်ဆို မရေးနိုင်ဘူး အမှန်ပြောတာ - အခု ဒီ Topic လေးက ကိုမုန်းလေးလည်း မအား ဆက်ရေးပေးမယ့်လူလည်း မရှိဖြစ်နေတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ Topic တစ်ခု သေနေသလို ဖြစ်နေတာနဲ့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး ဖြစ်မိတယ် - တော်တော်များများက တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ရှေ့ကနေ တက်လာတဲ့ Topic တွေကိုသာ ဝင်ဖတ်ကြလေ့ ရှိတာ နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ Topics တွေကို တော်ယုံဝင်မွှေကြလေ့ မရှိဘူး - အဲ့လို မဖြစ်ရအောင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ Thread တစ်ခုကို မိသားစုဝင်များ ပြန်သတိထားမိအောင် ကျွန်တော် ဒီ Topic လေးမှာပဲ Laptop ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆက်ရေးပေးပါ့မယ် -
ကိုမုန်းလေးလိုတော့ Screenshots တွေနဲ့ ကျွန်တော် တင်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ - Laptop ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ အခွေပေါင်း ၃၀ - ကြည့်မယ်ဆို နာရီပေါင်း ၁၀ နာရီကျော် ကြည့်ရမယ့် HD videos တွေရှိပါတယ် - HD videos ဆိုတဲ့ အတိုင်း Quality ကတော့ ပြောဖို့ မလိုဘူး - ဒီလို Laptop ပြင်ဆင်ရေး ဗွီဒီယိုမျိုးတွေကို Youtube မှာလည်းရှာကြည့်လို့ ရပေမယ့် ဒီအခွေမှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ အရမ်းကို အသေးစိတ်တယ် - Quality ကလည်း Youtube မှာ ကြည့်ရသလို low quality မဟုတ်ဘူး - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက laptops တွေကို ပြင်ပေးလာတဲ့ laptop specialist - Steve Cherubino ကိုယ်တိုင် အသေးစိတ် ရိုက်ကူးထားတဲ့ Videos ပါ - သူဖန်တီးထားတဲ့ Official laptop repair blog လည်း ရှိတယ် - ဒီ Laptop Repair Video Collection ဟာ တန်ဖိုးအားဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် $54.95 ရှိပါတယ် - တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဝယ်ကြည့်ပါ - ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ ဒီနေရာမှာ ပညာရပ်တစ်ခု ကို လေ့လာချင်ပေမယ့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူတွေ အတွက် ဦးစားပေးပြီး ဗွီဒီယိုထဲမှာ ပါမယ့် ရှင်းလင်းမှုတွေထဲက ပါဝင်မယ့် အစီအစဉ်အကြမ်းဖျဉ်းကို မိတ်ဆက်ပြောပြပြီး အပိုင်းလိုက် Download ချဖို့ Links တွေ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
ကျွန်တော် အရင်တုန်းက ခုလိုမျိုး Laptop Repair တို့ Desktop Repair တို့ဆိုတဲ့ Videos တွေ ခဏခဏ ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ် - ကြည့်ဖူးသမျှတော်တော်များများက မရှင်းမရှင်းနဲ့ အဖြစ်တွေပဲ လုပ်ထားကြတာ - ခု ဒီအခွေမှာတော့ ကျွန်တော်စကြည့်တည်းက Laptop ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော် အသေးစိတ်ရိုက်ကူးထားတာ တွေ့ရသလို အခေါက်ခေါက် ပြန်ကြည့်တိုင်း အခေါက်ခေါက် အခါခါ Knowledge တွေ ရခဲ့တယ် - ဝါသနာပါသူများ မပြတ်မကွက် လေ့လာကြည့်ပါ - အဓိက မှာချင်တာ Laptop Repair ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မြင်လိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ ပြင်စရာ Laptop မရှိပဲ ဒီ Videos တွေ ကြည့်ပြီး ဘာမှအသုံးမဝင်လာမှာ မဟုတ်လောက်ပါဘူးလို့ မထင်ပါနဲ့ - ပြင်စရာ Laptop မရှိသေးလည်း ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် ကြည့်ဖြစ်အောင်သာ ကြည့်လိုက်ပါ - Knowledge အများကြီး ရလာပါလိမ့်မယ် -
အပိုင်း ( ၃၀ ) ရှိပါတယ် - ကျွန်တော် တစ်နေ့ နှစ်ပိုင်း ( ဒါမှမဟုတ် ) သုံးပိုင်း ပုံမှန်တင်ပြီး ဗွီဒီယိုထဲမှာ ပါမယ့် ရှင်းလင်းမှုတွေထဲက အစီအစဉ်အကြမ်းဖျဉ်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ် - အပိုင်းလိုက် ဘာကို လေ့လာနိုင်မယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ - ဒီနေ့အတွက် သုံးပိုင်းကတော့ -
Introduction - ဒီအပိုင်းမှာက စာအုပ်တစ်ခုရဲ့ အမှာစာ သဘောမျိုးပဲ - တစ်ချို့ကတော့ အမှာစာဆို မဖတ်တော့ပဲ ကျော်သွားကြတာ များတယ် - အမှန်က အမှာစာ ဆိုတာ စာအုပ်တစ်ခုရဲ့ အသက်ပါ - ဆိုရရင် အမှာစာ ဆိုတာထဲမှာ စာအုပ်ကို ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ စာရေးသူရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ - ခံယူချက်တွေ - ဘယ်လိုရေးသားခဲ့တယ် ဆိုတာတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် - အဲ့လိုမျိုးပဲ ခု ဖော်ပြသွားမယ့် Introduction အပိုင်းမှာ ဒီဗွီဒီယိုကို ဖန်တီးခဲ့သူရဲ့ စိတ်ကူးတွေ - ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်တွေ - ဘာတွေကို အရင်ဦးဆုံး လေ့လာသင့်မယ် ဆိုတာတွေကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ် -
01_-_Introduction-HD.avi (12.18 MB)
Download via MutiUpload!!
01 - Introduction-HD.avi (12.2 MB)
Tools - ဒီအပိုင်းမှာတော့ Laptop တွေပြင်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ ဘယ် Tools တွေကို အဓိကသုံးတယ် - ဘယ် Tools တွေကတော့ ဆောင်ထားသင့်တယ် - ဘယ်တံဆိပ်တွေ ကောင်းတယ် - အပိုပစ္စည်း ဘာတွေ ဆောင်ထားသင့်တယ်ဆိုတာ အသေးစိတ် ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီ မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
02_-_Tools-HD.avi (72.77 MB)
02 - Tools-HD.avi (72.8 MB)
Batteries - ဒီအပိုင်းမှာတော့ Batteries တွေ ကောင်းမကောင်း ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ - လဲဖယ်ဖို့ လိုမလား မလိုဘူးလား - ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Laptop နဲ့ Power adapter က ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ - Voltage, Amps နဲ့ Watt တွေရဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေ အကြောင်း - ကိုယ့် Laptop နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် Power adapter ကို ဘယ်လို ရွေးချယ် ဝယ်ယူမလဲ - Battery ကို Charging မဝင်ရင် Battery မကောင်းတာလား DC jack ပျက်တာလား ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ - အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ ဘယ်လိုတိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးမလဲ - Online မှာ ပစ္စည်းရွေးချယ် ဝယ်ယူနည်းက ဘယ်လိုတွေ ရှိလဲ - စတဲ့ Batteries နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တော်တော်များများကို ဒီအပိုင်းထဲမှာ ဆွေးနွေးသွားပါလိမ့်မယ် - အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းလင်းချက် ဖြစ်နေတာမို့ စကားပြောတိုင်းကို တတ်နိုင်သမျှ သေချာနားထောင်ပြီး နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ - ချက်ချင်း နားမလည်သေးရင် တစ်ပိုင်းချင်းစီကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ကြည့်ပါ - တန်ဖိုးရှိတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် -
03_-_Batteries-HD.avi (101.92 MB)
03 - Batteries-HD.avi (101.9 MB)
Last edited by KznT; 24-03-2011 at 07:00 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 48 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုသီဟ, ကိုစံငြိမ်း, ကိုသီလ, ချစ်သမီး, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, မဒီ, မုန်းလေး, ရဲရဲလေး, သန့်ဇင်ဌေး, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အေးမင်းမောင်, မြင့်မိုရ်, ah nai, arkaraung, azp09, bagothar85, blackNwhite, bonge, eiei, g00gle, htoo war, htun30, kingofvirus, ko lin, kyaukphyu, KZaw, Lwin Thu, minthike, minthumon, mmkyioo, Moe Tain, pannuko, phyomyintthein, PyaitSone, sky4ster, soehtetpaing, Thein Htike, thetnaung87, tu tu, wahgyi, yawnathan, zawyehtut, zo
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က တစ်ခြား ကိစ္စတွေဘက်လှည့်နေလို့ ဆက်မတင်ပေးဖြစ်ဘူး - ဒီနေ့ နောက်ထပ် ( ၂ ) ပိုင်းဆက်ပြီး တင်ပေးပါမယ် - တကယ်က ကျွန်တော် ဒီအပိုင်း ( ၃၀ ) လုံး တင်ထားပြီးသားပါ - အပိုင်း ( ၃၀ ) လုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း မတင်ပေးရတဲ့ အကြောင်းက ဒေါင်းလုပ်ပဲ ချပြီး မကြည့်ဖြစ်ကြမှာ စိုးလို့ - တစ်နေ့ နဲနဲ ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင်လည်း တကယ်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ် - ဒေါင်းလုပ်ချရမှာကလည်း တစ်နေ့မှ နှစ်ပိုင်း - သုံးပိုင်းလောက် ဆိုတော့ သိပ်အများကြီး မပင်ပန်းဘူးပေါ့
CD/DVD Drives - Laptop ပြင်ဆင်ရေးကို ဝါသနာကြီးသူတွေ အတွက် ဆက်လေ့လာဖို့ ဒီနေ့ ဖော်ပြပေးမှာ CD/DVD Drives ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကဏ္ဍပါ - ဒီကဏ္ဍကို လေ့လာပြီးရင်
CD/DVD Drives ပျက်ယွင်းတာကို ဘယ်လို ဆန်းစစ်ရမယ်
Laptop တစ်ခုချင်းစီမှာ ပါဝင်တဲ့ CD/DVD Drives တွေရဲ့ အဂါင်္ရပ်တွေ နဲ့ သူတို့ရဲ့ ကွာခြားချက်တွေ
Laptop အမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီး CD/DVD Drives တွေကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ပင်မ နေရာတွေ အကြောင်း
CD/DVD Drives တွေကို ဖြုတ်ခြင်း တပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်
အွန်လိုင်းပေးချေ စနစ်နဲ့ CD/DVD Drives အသစ် ဝယ်ယူနည်း လမ်းညွှန်
စတဲ့ အပိုင်းတွေကို တစ်ဆင့်ချင်းစီ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
04 - CD-DVDDrives-HD.avi (94.4 MB)
Motherboards - Motherboards ကတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အပိုင်း လေးပိုင်းထက် ပိုပြီး နဲနဲလေးရှုပ်တယ် - ရှုပ်တယ်ဆိုတာ ခက်တာကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး - သူ့မှာက Motherboards ဖြစ်တဲ့အလျှောက် ဆန်းစစ်ရမယ့် Steps တွေများတာ - အဲ့တာကိုပဲ တစ်ချက်ချင်းစီ ရှင်ထားပေးတဲ့ ဒီအပိုင်းမှာ သူ့ဖော်ပြချက် အားလုံးကို ကြည့်ရှုပြီးသွားရင် -
Motherboards ပျက်မပျက် ဘယ်အချက်တွေကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်မလဲ
Turn on လုပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ Computer လုံးဝပွင့်မလာ Motherboards ကြောင့်လား
Components တွေ အလုပ်မလုပ်တော့တာ Motherboards နဲ့ ဆိုင်သလား
ခဏခဏ ကွန်ပြူတာ Shut down ကျနေတာ Motherboards မကောင်းတာကြောင့်လား
ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည် မရရှိတော့ပဲ Blue Screen တက်တာ - ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်မလုပ်တော့တာတွေ Motherboards ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလား
Motherboards ပျက်မပျက် ဆန်းစစ်တဲ့ နေရာမှာ ဘယ်အချက်တွေကနေ စပြီး စစ်ဆေးရမလဲ
Motherboards ပျက်တာကြောင့် မဟုတ်ပဲ Batteries က ပျက်လို့ ဖြစ်တာလား AC Adapter ပျက်လို့ ဖြစ်တာလား Power jack က Damage ဖြစ်တာလား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ဘယ်လို စစ်ဆေးရမလဲ
Motherboards power on လိုက်ပေမယ့် power on မလာတာ တစ်ခြား ဘာအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်သေးလဲ
Components တွေ ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်လို့ အသစ်လဲတပ်လိုက်ပေမယ့် ပြန်ကောင်းမလာတာ ရော Motherboards နဲ့ ဆိုင်သလား - တစ်ခြားဘယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ စမ်းသပ်လို့ ရနိုင်ဦးမလဲ
Motherboards ပျက်မှန်း သိပြီဆို Motherboards အသစ်ကို အွန်လိုင်းဈေးကွက်မှာ ဘယ်လို ရှာဖွေ ဝယ်ယူမလဲ
ဝယ်ယူတဲ့ နေရာမှာ ဘယ်အချက်တွေကို သတိထားရမလဲ
စတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
05 - Motherboards-HD.avi (82.3 MB)
Last edited by KznT; 24-03-2011 at 07:01 AM..
ကိုကိုသီဟ, ကိုစံငြိမ်း, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, မုန်းလေး, ရဲရဲလေး, သန့်ဇင်ဌေး, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, အေးမင်းမောင်, bagothar85, blackNwhite, bonge, g00gle, htoo war, htun30, ko myo, KZaw, Lwin Thu, minthike, minthumon, mmkyioo, PyaitSone, sky4ster, Thein Htike, thetnaung87, wahgyi, yawnathan, zawyehtut
ပြန်စာ - Laptop ပြင်ဆင်မှု နည်းလမ်းများ
hello ko KznT.......................
i like ur post...........
i m waiting for ur sharing...........
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ mmkyioo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, Lwin Thu
ကိုမုန်းလေး ကျေးဇူးပြု ပြီးကူ ညီပါအုန်း ကျွန်တော့ laptop Toshiba Equium A100 - 147 model က Power မလာဘူး ဖြစ်နေတယ် မိုးရေ နဲနဲ ထိ သွားလို့ အပူနဲနဲ ပေးမိတယ် အဲ့တာ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ ဖြေကြား ပေး ပါ နော် အရေးကြီး လို့ပါ.
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ aungkohtat အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, Lwin Thu, sky4ster
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ tuntunlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by tuntunlay
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခြားဘက်လှည့်နေတာနဲ့ ဒီ Upload တင်ပေးတဲ့ အပိုင်းကို ပြန်လှည့်မကြည့်မိဘူး - သတိက ရပါတယ်။ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ - ဒီနေ့တော့ တစ်ခြား ကျန်နေတဲ့ အပိုင်းလေးတွေ ထပ်ပြီး ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဖြေးဖြေးချင်း စုံအောင် တင်ပေးသွားပါမယ်။
How To TakeaLaptop Apart - ဒီနေ့ ဆက်သွားမယ့် အပိုင်းက Laptop တွေကို ဘယ်လို ဖြုတ်ခြင်းတပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်မလဲ ဆိုတဲ့ အပိုင်းပါ။ ဒီအပိုင်းက အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် Laptop တွေက အားလုံးကို ခြုံပြီး Laptop လို့သာ စကားလုံး တစ်လုံးတည်းနဲ့ ပြောတာ - သူတို့ကို တစ်ခုခု ပြင်ဆင်စရာရှိလို့ ဖြုတ်မယ် တပ်မယ်ဆိုရင် Model အလိုက် တည်ဆောက်ပုံနဲ့ ဖြုတ်တပ်ပုံ မတူညီ ကြပါဘူး။ အဲ့တော့
မတူညီတဲ့ ဖြုတ်တပ်နည်းတွေ အားလုံးထဲက ဘယ်လိုနည်းမျိုးက အန္တရာယ် အကင်းဆုံးနဲ့ အဆင်ပြေဆုံး ဖြုတ်တပ်နည်းမျိုး ဖြစ်မလဲ
Laptop တွေကို ဖြုတ်တပ်လုပ်ဆောင်ရာမှာ ဘယ်အချက်တွေကို သတိထားရမလဲ
Desktop နဲ့ မတူတဲ့ Laptop မှာ များပြားလွန်းတဲ့ Screws တွေကို ဖြုတ်ချင်း တပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်တဲ့ အချိန် နေရာ မှားယွင်းတပ်ဆင်မှုမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဘယ်လို Method တွေကို အသုံးပြုနိုင်မလဲ။
စတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ဒီအပိုင်းမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
06 - HowToTakeaLaptopApart-HD.avi (177.7 MB)
Last edited by KznT; 10-05-2011 at 04:23 PM..
ကိုစံငြိမ်း, ချစ်သမီး, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, ဖြိုးယံလေး, aungzaw, bonge, g00gle, htoo war, htun30, ko myo, KZaw, Lwin Thu, minthike, minthumon, mmkyioo, zawyehtut, zo
Power Problems - Gateway Laptop - ဒီနေ့ ဆက်ပြီး လေ့လာမှာ Gateway Laptop မှာ ဖြစ်တဲ့ Power Problems ကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ - ကျွန်တော်က Laptop နဲ့ ပတ်သတ်ရင် အရင် အမြဲ ထိတွေ့နေတာ SONY VAIO, LENOVO, TOSHIBA, MSI, SAMAUNG, FUJITSU ... ဆိုတဲ့ တံဆိပ်မျိုးတွေပဲ ရှိတယ်။ Gateway Laptop တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိပ်အတွေ့အကြုံမရှိတော့ ဒီအပိုင်းလေးကို စိတ်ဝင်စားမိတာတော့ အမှန်ပဲ။ ပြင်ပြတဲ့သူကလည်း တစ်ဆင့်ချင်း စစ်ဆေးပုံတွေ အသေးစိတ် ပြပေးတယ်။
ဒီအပိုင်းကို လေ့လာပြီးရင် Power Problems နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြဿနာကို ဘယ်လို ခြေရာခံရမယ် ဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့်သိလာမယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကို တစ်ဆင့်ချင်း စစ်ဆေးအဖြေရှာနည်း နားလည်လာမယ်။
နောက်ပြီး Gateway Laptop အဖြုတ်အတပ်ကိုလည်း မျက်မြင်တွေ့ရမယ်။
Power adapter ဖြတ်ညှက်ကပ်လုပ်တာနဲ့ အစားပြန်ထိုးတာတွေကိုလည်း လေ့လာရမယ်။
တစ်ခုပျက် အကုန်လဲ ဆိုတဲ့ System ထက် အကုန်အကျသက်သာအောင် ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လို အစားထိုး ပြင်ဆင်လို့ ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။
PowerProblems-GatewayLaptop-HD.part1.rar (104.9 MB)
PowerProblems-GatewayLaptop-HD.part2.rar (104.9 MB)
PowerProblems-GatewayLaptop-HD.part3.rar (104.9 MB)
PowerProblems-GatewayLaptop-HD.part4.rar (104.9 MB)
PowerProblems-GatewayLaptop-HD.part5.rar (61.14 MB)
Last edited by KznT; 11-05-2011 at 11:02 PM..
ကိုစံငြိမ်း, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, bonge, htun30, ko myo, KZaw, Lwin Thu, minthike, minthumon, tu tu, zawyehtut, zo
Toshiba Laptop PowerJackFix
Toshiba Laptop PowerJackFix - ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ Toshiba laptop နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာပါမယ်။ လေ့လာမယ့် ပြဿနာက Adapter နဲ့ PowerJack ချိတ်ထားပေမယ့် Power မဝင်တဲ့ ပြဿနာပါ။
ဒီအပိုင်းကို လေ့လာပြီးရင် Laptop ရဲ့ အတွင်းပိုင်းက PowerJack နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာကို မျက်မြင်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
စမ်းသပ်နည်း အဆင့်ဆင့်ကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခြား latops တွေနဲ့ Toshiba laptops တွေရဲ့ တပ်ဆင်ပုံ ကွာခြားချက် - Screws အသုံးပြုထားပုံတွေကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။
Laptops တွေပြင်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ ဘယ် Rule ကို မဖြစ်မနေလိုက်နာရမလဲ ဆိုတာ သိရှိပါလိမ့်မယ်။
Power Problems - Gateway Laptop ပြင်ဆင်တုန်းက တစ်ခါတွေ့ခဲ့ရတဲ့ Soldering လုပ်ဆောင်နည်းကို ဒီအပိုင်းမှာ နောက်တစ်ကြိမ် အသေးစိတ် ထပ်မံတွေ့ရှိရပါမယ်။
08 - ToshibaLaptopPowerJackFix-HD.part1.rar (95.4 MB)
08 - ToshibaLaptopPowerJackFix-HD.part2.rar (95.4 MB)
08 - ToshibaLaptopPowerJackFix-HD.part3.rar (95.4 MB)
08 - ToshibaLaptopPowerJackFix-HD.part4.rar (19.7 MB)
Last edited by KznT; 12-05-2011 at 02:28 PM..
ကိုစံငြိမ်း, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, bonge, gemini.zaw5687, htun30, ko myo, KZaw, Lwin Thu, minthike, minthumon, mmkyioo, Thein Htun, tu tu, yelinoo, zawyehtut, zo
Motherboard Replacement-HPDV6000 - ဒီနေ့အတွက် မိသားစုဝင်များ လေ့လာနိုင်အောင် HP Laptops ( HPDV6000 ) မှာ Motherboard အသစ်လဲလှယ် တပ်ဆင်နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်အပိုင်းတွေမှာ Laptop တစ်လုံး ဖြုတ်တာ တပ်တာကို လက်တွေ့ မရှိသေးတာက လွဲရင် ဖြုတ်တပ်နည်း အဆင့်ဆင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ အသေးစိတ် ကျွန်တော်တို့ တွေ့ခဲ့ဖူးပြီးသားမို့ ဒီအပိုင်းကို လေ့လာတဲ့ အချိန်မှာ ဘာတွေအသစ် နားလည်လာနိုင်မလဲ ဆိုရင် -
Motherboard Replacement လုပ်ဆောင်မယ်ရမယ့် အခြေအနေတစ်ခုကို သိလာမယ်။
အရင်အပိုင်းတွေက ဖြုတ်တာ တပ်တာကို အဓိက လေ့လာခဲ့ပေမယ့် ဒီအပိုင်းမှာ Motherboard လဲဖယ်နည်းကို အသေးစိတ် တွေ့လာရမယ်။
HP Laptops ရဲ့ အတွင်းပိုင်း စက်ပစ္စည်း အပြင်အဆင် နေရာချပုံတွေ မြင်ရမယ်။
အဆင့်လိုက် ဖြုတ်ပုံနဲ့ အပိုင်းလိုက် ပြန်လည်တပ်ဆင်ပုံတွေကို တစ်ဆင့်ချင်းစီ တွေ့ရပါမယ်။
09 - MotherboardReplacement-HPDV6000-HD.rar (42.9 MB)
Last edited by KznT; 13-05-2011 at 10:45 PM..
ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, မောင်ပေါ်ဦး, အေးမင်းမောင်, blackNwhite, bonge, htun30, ko myo, KoYeWin, KZaw, Lwin Thu, minthike, minthumon, mmkyioo, tu tu, wahgyi, yelinoo, zo
ဖိုရမ်ကသူငယ်ချင်းတွေအတွက်...Laptop Services Guid...ဆိုတဲ့မြန်မာလိုပါတဲစာအုပ်လေးဝေမျှလိုက်ပါတယ်
မှက်ချက်.....Quote http://filebucket.info/?1fs6v8qfd @http://www.mmit-ebook.blogspot.com/ မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ thuya အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, လမ်းပြကြယ်, သန့်ဇင်ဌေး, မေဦးမွန်, မောင်ပေါ်ဦး, အေးမင်းမောင်, bagothar85, g00gle, KZaw, KznT, Lwin Thu, minthike, minthumon, phyomyintthein, PyaitSone, Thein Htike, tu tu, wahgyi, yelinoo
ကိုကေဇတ်လည်း ပြည်တော်ပြန်တော့မှာမို့ မအားလပ်တော့ဘူး ထင်တယ်။ ကျွန်တော် ကိုမုန်းလေး ကိုကေဇတ် တို့ ပိုစ့်ကို ဆက်ပီး အသက်သွင်းပေးချင်ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာလေး အကြောင်းမပြောခင်မှာ ကျွန်တော် Laptop ပြင်ဆင်ဖို့ Manuals တွေကို ဒီလင့်မှာ အသက်သွင်းပီး တင်ပေးနေတာ ရှိပါတယ်။ ဒါကကြော်ငြာပေါ့။ ဒီပိုစ့် နံပါတ် ၉ ထိ ပီးတာကိုတွေ့တယ်။ ကျွန်တော် နံပါတ် ၁၀ က စပီး ဆက် အသက်သွင်းပေးပါ့မယ်။
ဒီပို့စ်ကတော့ Relplay Keyboard လုပ်ဆောင်နည်းပါ။ Laptop တလုံးမှာ Keyboard ပျက်တာပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ကီးလေးတွေ ပျက်တာပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပြင်ဆင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ပိုစ့်ကို ကြည့်ပီးတော့ ဘာတွေ နားလည်လာမလည်ဆိုတော့ .
Keyboard Replay လုပ်ဆောင်ခြင်းကို အမြင်နဲ့ တက်ကျွမ်းလာမယ်။
Ribbon cable ကို ဖြုတ်ကာကျရင် စနစ်တကျ ဖြုတ်မှ Cable အပျက်အစီး မရှိနိင်တာကိုသိလာမယ့် အပြင် Ribbon cable ကို စကူနဲ့ သေချာ တွန်းဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာကို တွေ့ရမယ် နားလည်လာမယ်။
ဒီပိုစ့်တွေမှာရော အပေါ်က ပိုစ့်တွေက tutorials တွေမှာရော သတိထားမိချင်လည်း ထားမိပါလိမ့်မယ်။ မထားမိတာလည်း ရှိလိမ့်မယ်။ ဒီတွက်. ဘာပဲ့ ပြင်ပြင် Laptop battery ကို အရင်ဖြုတ်ပီးမှ ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကို စိတ်ထဲ့မှာ စွဲ့မှတ်ထားပေးပါ။
အပေါ်မှာ ကိုကျော်ဇင်သန့် တင်ပြပီးခဲ့တာတွေကတော့ .
ပိုင်း တွေပီးပါပီ။ Replay လုပ်မယ့် အပိုင်းတွေထဲ့မှာ ကျန်တာကတော့ CPU replay နဲ့ Screen Replay ပြင်မယ့် အပိုင်းတွေ ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒါတွေကို အချိန်ရရင် ရသလို ကျွန်တော် တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ ဒီနေ့တော့ ဒီပိုစ့်ကို ဒီမှာတင် နိဂုန်းချုပ်ပါရစေ…
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုသီလ, နီထွန်းဦး, မေဦးမွန်, မောင်ပေါ်ဦး, အေးမင်းမောင်, bagothar85, g00gle, htun30, ko lin, KoYeWin, KZaw, Lwin Thu, minthike, mmkyioo, pannuko, PyaitSone, tu tu, yelinoo, zo
ဒီလိုမျိူး ခဲရင်ဟာတွေ့ ရှင်ပြပေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်လဲရှင်းလင်းတင်ပေးအုံနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ sahanai အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, နီထွန်းဦး, aungkohtat, KoYeWin, Lwin Thu, minthike, yelinoo
Find More Posts by sahanai
ကျွန်တော် ဒီနေ့ ဆွေးနွေးပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ Sony Vaio မှာ ဘာပြင်ပေးမယ်ဆိုတာကို သိချင်နေလောက်ပီ။ ဒါကိုမဆွေးနွေးခင် ဆွေးနွေးပေးမယ် အရာ တခုရှိတာကိုဆွေးနွေးပေးချင်သေးတယ်။ ဒါကတော့ LCD ပြင်တဲ့ အပိုင်းလေးကိုပါ ထည့်ပီး တင်ပြပေးချင်တာပါ။ ကျွန်တော် Services သမားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး ပြင်ဆင်မူ အပိုင်းတွေကို တင်ပြပေးနေတယ်ဆိုတာကလည်း တော်နေလို့ နားလည်နေလို့ တက်နေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်သိတဲ့ အပိုင်းလေးတွေကို သူများသိစေချင်တာ တခုတည်းပါ။ ခုစာအုပ်မှာတော့ ရိုးရိုးစာလုံးလေးတွေနဲ့ ရေးထားသလို နားလည်လွယ်ပါတယ်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေး တအုပ်ပါပဲ့။ ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး LCD ပြင်ဆင်မူ စာအုပ်လေးကို အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူထားပီး သင်ခန်းစာ ရှေ့တက်ကြတာပေါ့။
ကဲ ဒီတော့ သင်ခန်းစာကို ဆက်သွားကြရအောင်။.။။ ဒီသင်ခန်းစာမှာ သတိထားကြည့်ဖို့လေး တခုကတော့ အရင်က Acer တို့ Asus တို့မှာ Adapter ကို စမ်းတဲ့အချိန်မှာ 19.56 V ရှိလို့ Tester နဲ့ 20 V ထားပီး စမ်းတာ ဟုတ်ပေမယ့် 16 V ရှိတာကိုလည်း 20 V ထားပီး စမ်းသပ်သွားတာလေးကို သတိထားမိမယ်ထင်တယ်။နောက်တခုက PCI Wireless Card ကို ဖြုတ်သွားတဲ့နေရာလေးကို သတိထားပီးကြည့်ပါ။ Wireless Card ပျက်သွားရင်လည်း ဒီအဆင့်ကိုသေချာနားလည်ပီး ဖြုတ်တက်နိင်ရင် ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ Sony Vaio Laptop တွေ တော်တော်များများ ဒီတိုင်းပါပဲ့။
ဒီ Video ကိုကြည့်တာနဲ့ တော်တေ်ာများများကို သိနိင်ပါတယ် Hardware တခုပျက်ပီဆိုရင် ဘယ်အပိုင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာလေးကို သိလာသလို Power မလာတိုင်းလဲ့ Adapter ပျက်တာ မဟုတ်သလို Graphic card ပျက်တာလည်း မဟုတ် Motherboard ကြွသွားတာလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ပြသနာကို ရှာနေတာ တ၀က်လောက်ရောက်မှတွေ့တော့ သူပြောတဲ့ အသံလေးကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ ပျော်ရွှင်သွားတဲ့ အသံမျိုး ( I see the Problem ) ဆိုပီးတော့ …..။ ဒီပြသနာမှာတော့ Ribbon cable ဆိုလို့ Keyboard မှာပဲ့ ရှိတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ လူတွေတွက် အဖြေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မှာပါ Motherboard တွက် ribbon cable ရှိသလို circuitboard တွက် Ribbon cable ရှိတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ နောက်တခုက circuitboard တွက် Ribbon cable ကောင်းမကောင်းစမ်းတာ ဘယ်လို စမ်းသပ်သွားလည်းဆိုတာကို သတိထားကြည့်ပါ။နောက်ထပ် လျှိုဝှက်ချက်တွေကိုတော့ ကိုယ်ကိုတိုင် သေချာကြည့်ပီး ဆက်လက်လေ့လာပါလို့ ပြောကြားရင်းဒီပိုစ့် ကို ဒီမှာတင် နိဂုဏ်ချုပ်ပါရစေ…
အောက်မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လင့်ကနေ ဒေါင်းယူပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, နီထွန်းဦး, မောင်ပေါ်ဦး, aungkohtat, aungphyo, bagothar85, g00gle, james249, KoYeWin, KZaw, Lwin Thu, pannuko, PyaitSone, tu tu, yelinoo, zawyehtut
23-07-2011, 08:04 AM
12 - PowerJack-DellB130-HD
ဒီနေ့တော့ စိတ်ကူးပေါက်ရာ မဟုတ်ပဲ့ ကျွန်တော် ခရီးဆက်ပေးနေ့တဲ့ ဒီပိုစ့်ကိုပဲ့ ဆက်ပီး ပို့စ်အသစ် တက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ ဒီပို့စ်ကတော့ တကယ်ကို သေချာလေ့လာထားသင့်တဲ့ အပိုင်းတွေပါပါတယ်။ Video ထဲ့မှာ မရှင်းတဲ့ အပိုင်းတွေနဲ့ သိချင်တဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိလာခဲ့ရင် အောက်မှာ မေးခဲ့နိင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ နားမလည်တာမျိုးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် ပြန်ပီး သေချာ ရှင်းပေးနိင်အောင် ကြိုးစားပေးပါ့မယ်။
ဒီပိုစ့်က Video ကြည့်ချင်းဖြင့် ရရှိနိင်သော အကျိုးများ
Dell laptop ဖြုတ်တက် တပ်တက်မှာ ဖြစ်သလို တခုခု ပျက်လို့ ပြင်မယ်ဆိုလည်း တဆင့်ခြင်းဆီပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ်ကို နားလည်သွားမှာပါ။
Powerjack ကို ပြန်လည်ပြုပြင်သွားတာကို မျက်မြင်တွေ့ရှိနိင်ပါလိမ့်မယ်။
Power jackpin ကို ကောင်းမကောင်း စမ်းသပ်တဲ့ နည်းနဲ့ Ribbon တွေ ဖြုတ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်.
ဒီပိုစ့်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာ မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Dell Laptop တွေကို အစိတ်အပိုင်းတခုခုကို Replay လုပ်တဲ့နေရာမှာ အစိတ်အပိုင်း အဖြုတ် အတပ် တွေ အတွက် အထောက်အကူပြုမှာ ဖြစ်သလို Electronic နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အပိုင်းလေး အနည်းငယ်ကိုပါ မြင်တွေ့ရပါဦးမယ်။
ဒီထက် ဒီထက်……သိချင်ရင် Video မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိင်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
ကိုပိုင်, စွမ်းကမ္ဘာ, နီထွန်းဦး, မေဦးမွန်, aungkohtat, bagothar85, g00gle, htun30, KoYeWin, KZaw, Lwin Thu, nyilinnge, pannuko, PyaitSone, tu tu, yelinoo, zawyehtut
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် အားပေးသွားတယ်နော် အခု မှ ၀င်တာမကြာသေးတော့ အကုန်လုံးဘဲဖတ်ပီးအားပေးသွားပါတယ် ဆက်ပီးအောင်မြင်ပါစေ....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ chaw12 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by chaw12
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ chanmyaeaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by chanmyaeaung
သိချင်တာတစ်ခုမေးမယ်နော် လက်တော့မှာ မတက်တော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်အပိုင်ကိုအရင်စစ်ဆေးသင့်သလဲ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ rayon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဘယ်အထိတက်သေးလဲ ဆိုတာပေါ့ ဥပမာ windows စစခြင်းအထိလား
ဒါမှမဟုတ် hard disk information, ram information တွေပြတဲ့အထိလား စတာပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်အပိုင်းကိုစစ်သင့်လဲကကွာမှာပါ
ဥပမာ လုံးလုံးမတက်တော့ဘူး ဆိုပါစို့ power supply မီးလင်းသေးလား
power supply adapter, battery စတာတွေကို စစ်ရမယ် စသည်လိုမျိုးပေါ့
နီထွန်းဦး, aungkohtat, bagothar85, bonge, g00gle, pannuko, tu tu, yelinoo, zawyehtut
ကျနော် စက် Power ကို ဖွင့်လို့ မရလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ သိတဲ့ သူများ ကူညီပေးပါအုန်း
Acer Core i3 ပါ ဆိုင်က motherboard လဲရမယ်ပြောပါတယ် သိတဲ့သူကူညီပေးပါ တယ်လို့လဲရမယ်ဆိုင် motherboard ဘယ်လောက်ရှိလည်း ပြောပေးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဇာဇာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဇာဇာ
အောင် နိုင် သူ
မုန်းလေးရေ ကျွန်တော့် စက်က ဇက်*၄၆၀ လီနိုဗို စက်* စဖင်*့တာနဲ့ ခလုပ်*ညိနေတယ်* စာရိုက်*ရင်*လည်*း စာရ်ဝက်*တ်ေဝပေးနေတယ်* ဖန်*ခ်ယင်*ကီးန်ိပ်*မ ရပ်*တယ်*။ ဘယ်*လိုလုပ်*ရမလဲ ကူညီပာဉိး
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ အောင် နိုင် သူ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အောင် နိုင် သူ ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by အောင် နိုင် သူ
ဆိုနီ ဗိုင်အိုတွေလည်း ဖြုတ်ရတာ တော်တော် လွယ်ပါတယ်....ဘတ်ထရီဖြုတ်. ဒရိုက် ဖြုတ်ပြီးလို့ ခခရူတွေ အကုန် ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ ပြုတ်ပါပြီ....ဒါပေမဲ့ စခရူတွေ ပြုန်း ကုန်ရင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိတော့ဘူး...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ooooko အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 99 ခုအတွက် 314 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကို လေ့လာရင်း ပညာတွေ ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရလို့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျနော်တခုလောက် အကူအညီတောင်းချင်လို့ ပါ ကျနော်က ဘာမှတော့မတတ်ပါဘူး စာဖတ်တတ်တာတခုတည်း ဖတ်ပြီးလက်တွေ့ လိုက်လုပ်ရတာ ၀ါသနာပါတယ် သူငယ်ချင်းစက်တွေ ပျက်ရင် ပြင်တတ်တတ်မတတ်တတ် လက်ခံလိုက်တယ် ပြီးမှ ဖိုရမ်ထဲဝင်မွှေပြီး စာတွေဖတ် ပြင် မသိ အကူအညီတောင်းနဲ့ ကျနော်ကတော့ ပျော်နေတာပဲ ခုလဲ ဒီသင်ခန်းစာကိုဖတ်တာ ခနခန
ပြင်စရာမရှိတော့ မေးစရာလဲမရှိဘူး ခုတော့ရှိလာပြီ သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ စက့့်Hard Disk Drive ပျက်တာ လဲချင်လို့ကျနော့်ကို ပြင်ခိုင်းတာ ဖြုတ်တာကတော့ဟုတ်နေတာပဲ အသစ်ဝယ်ဖို့ ကျ ပြသာနာတက်ရောဗျာ ကူညီကြပါဦးနော် ကျနော်အွန်လိုင်းမှာ ကြိုးစားရှာဝယ်တယ်ဗျ သူ့Model နဲ့ မတွေ့ ဘူး ကျနော့်ကိုကူရှာပေးပါဦးဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူများစက်ကြီး ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဗျ
စက်အမျိုးအစားကတော့ Sony VAIO ပါခင်ဗျာ ဒါပေမဲ့သူ့HDD ကတော့ Samsung Model:HM321HI
drive rotation က ကျနော်မသိပါဘူးခင်ဗျာ ခွင့်လွှတ်နော် ကျနော်ရှာတာ မူးနောက်သွားတယ်ဗျာ သိတဲ့ညီအစ်ကိုများ ကျနော့်ကို ကူညီရှာပေးပါဦးခင်ဗျာ ကျနော်က စနေ တနင်္ဂနွေ ပဲ စာဖတ်အားလို့ ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အားလုံးကို အစဉ် လေးစားလျှက်................ )ကွက်တိ(
ကျနော်ဟာ ကျနော့်ဘ၀ရဲ့ အရေးပါတဲ့ လူဖြစ်တယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကွက်တိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကွက်တိ
တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ဒီတော့ပစ်ကိုဘယ်သူမှ ၀င်မကြည့်ကြဘူးထင်တယ်နော် ကျနော်မေးထားတာဖြေမဲ့လူ မရှိလို့ ဒီလိုပြောမိတာပါ ကျနော့်ပြသာနာပြေလည်သွားပါပြီခင်ဗျာ စာသေချာမဖတ်လို့ ဒီလိုတုံးအအ ဖြစ်နေမိတာဗျ
အထက်ကကိုမုန်းလေးရှင်းပြထားတာ Interface တူရင်ရပြီလို့ ရေးထားတာ ကျနော်ငတုံးသေချာ နားမလည်လို့ကိုယ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ ဟက်ဒစ် ပေါ်ကအတိုင်း လိုက်ရှာဝယ်တာ ဘယ်တွေ့ မလဲဗျာ ကိုယ့်ဟာကိုထုလိုက်ချင်တယ် အ လွန်းလို့ လေ ကျနော် ဒီတော့ပစ်ကို တွေ့ ပြီးကတည်းက သူငယ်ချင်းစက်တွေကို ဟက်ဒစ်လဲပေးတာ ၅လုံးလောက်ရှိပြီ မှတ်တမ်းလဲမတင်ထားမိဘူး ကျနော်ကလေ့လာဆဲမို့ လို့ပို့ စ်မတင်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ (ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိလို့ လေ ) ခုတော့ မတတ်တစ်ခေါက်နဲ့ တင်လိုက်ဦးမယ် ဒီတော့ပစ်လေး သေသွားမှာစိုးလို့ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်အောင်လို့ ပါခင်ဗျာ အမှားပါရင်လဲလေ ကျနော့်ရဲ့ စေတနာ အမှားပါလို့ သတ်မှတ်ပေးကြနော် အယူခံဝင်နေတာနဲ့ ပို့ စ်ကရှည်ေ်တာ့မယ် ဒီနေ့ ကျနော် ASUS mini laptop ဟက်ဒစ် လဲတာကိုတင်ပြသွားပါမယ်
နံပတ်တစ် အနေနဲ့ ဘက်ထရီကိုဖြုတ်ပါ (မမေ့ပါနဲ့ နော်)ဓတ်လိုက်မှာစိုးလို့ 
နံပတ်နှစ် အနေနဲ့ စက်ရဲ့ အောက်ဘက်က စကူလေးတွေကိုဖြုတ်ပါမယ် အောက်ကပုံကိုကြည့်နော်
ပြီးရင်စက်အပေါ်ဘက်ကိုပြန်သွားပါမယ် ကီးဘုတ်ကိုဖြုတ်ပါမယ် အထူးသတိပြုပါနော် ကီးဘုတ်ကြိုးက အရမ်းတိုလို့ ပါ အောက်ကပုံကိုကြည့်နော်အ၀ါရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးက ချုပ်ထားတဲ့ခလုတ်လေးတွေကို
ကီးလေးတွေဖိပြီး စကူဒရိုက်ဘာဖြစ်ဖြစ် ပါးတဲ့အရာလေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဖိပြီးလှန်လိုက်ပါ ဖြေးဖြေးလှန်နော် ချုပ်ထားတာတနေရာတည်းမဟုတ်လို့ ပါ လှန်ပြီး သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ ခနခံထားလိုက် နောက်တနေရာကိုလဲ ဒီတိုင်းသွားပြီးဖိလှန်လိုက်ပါ
မားသားဘုတ်နဲ့ ဆက်ထားတဲ့ကြိုးကိုဖြုတ်လိုက်ရင် ကီးဘုတ်ဖြုတ်ခြင်း ပြီးစီးသွားပါပြီခင်ဗျာ
ဖြုတ်ပြီးရင် အောက်ကပုံလိုမြင်ရပါမယ် အ၀ါရောင်နဲ့ ဝိုင်းပြထားတာလေးက ကီးဘုတ်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ် အနီရောင်နဲ့ ဝိုင်းပြထားတာလေးကို ဖြုတ်ပြီး ဟက်ဒစ်ကိုဖြုတ်လိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျာ
ပြန်လည်တပ်ဆင်ဖို့ အတွက် ကိုယ်ဖြုတ်လာတဲ့အစိတ်အပိုင်း တဆင့်ချင်းစီကိုသေချာမှတ်သားဖို့ လိုပါတယ်နော် အထူးအားဖြင့် စကူတွေပေါ့ အတိုအရှည်မတူတာတွေရှိပါတယ် ခွဲခြားမှတ်သားထားရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ ကျနော်ကမှားယွင်းမှာစိုးလို့စာရွက်အလွတ်တခုမှာ စတစ်ကာကပ်ပြီး ကိုယ်ဖြုတ်ထားတဲ့စကူကို ကပ်ထားလိုက်တယ် အောက်မှာစာပါတွဲရေးထားလိုက်တာ လူပိန်းနည်းပေါ့ ဘာဖြစ်ဖြစ်မမှားဖို့ အဓိကမဟုတ်လားနော် အားလုံးအဆင်ပြေစွာ ဖတ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ လိုအပ်တာရှိရင်လဲ ကျနော့်ကို သင်ပြသွားပါဦးခင်ဗျာ HP တလုံး ဟက်ဒစ်လဲဖို့ ရှိပါသေးတယ် မှတ်တမ်းတင်ပြီး ပို့ စ်တင်ပေးမယ်နော်
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ကွက်တိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, ဖိုးခွား(တောင်ပေါ်), မုန်းလေး, htun30, lu soe, MF_Admin, pannuko, tu tu
ကိုမုန်းလေးခင်ဗျား ကျွန်တော့် Laptop က MSI 1414 mega book s430x AMD ဖြစ်ပြီး VGA က nevidia Geforce Go 6100 ဖြစ်ပါတယ်၊ အခု အဲဒီ VGA Card ပျက်နေတယ်လို့ယူဆပါတယ်၊ အဲဒါ Board ကနေVGA Card ကိုဘယ်လိုဖြုတ် ရတယ်ဆိုတဲ့နည်းပညာလေးသိလိုပါတယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး သင်ပြပေးပါ၊ ဈေးကွက်မှာအဲဒီ VGA Card ကိုဝယ်လို့ရနိုင်ပါသလား ဖြေ ကြားပေးပါ၊
Find More Posts by တင်ဝင်း
Laptop Power မတက်ရင် ဘယ်အပိုင်း ကို စစ်ဆေးသင့်ပါသလဲ ။( ဘထ္တရီးကောင်းသည်)
ကျွန်တော့် Notebook Acer E1-431 လေးမှာ ကွန်ပျူတာ စကရင်က စစဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာ မငြိမ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်မိနစ်၊ နှစ်မိနှစ်ဆိုရင်တော့ ငြိမ်ပြီး အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ မော်နီတာ ကြိုးမကောင်းဘူးလားဆိုပြီး စက်ကို ဖွင့်ပြီး စမ်းကြည့်တော့လည်း မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုမျိုး Problem လေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုမျိုး ပြုပြင်လို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတာလေး တစ်ချက်လောက် ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။